> Resource > Apps > Samsung Said: Apple Khasaarooyin maxkamadda qaadisteeda dib Joojiya waxaa habboon?
Samsung vs Apple: The patent Apple waa baadil?
Arrinta ku saabsan Apple ay kasoo horjeeddo Samsung patent jebinta leedahay horumarka cusub. On Nov 20, 2013, Samsung weydiiyay garsoore Maxkamadda waa in ay laasho Apple magdhow qaadisteeda. Samsung ayaa sheegay in Mareykanka Xafiiska Patent- iyo Astaanta weyddiiyey patent ee Apple - No. 7,844,915, sidoo kale loo magacaabay qabo in Zoom, una Maleeyeen in this patent Apple laga yaabaa in aan waxba ka jirin. Samsung ayaa xusay in ay mooshin, tallaabada laga qaaday Xafiiska Patent- iyo Astaanta ay ka dhigaysa in aan waxtar lahayn in ay sii wadaan shaqada xeerbeegta ee, kaas oo gebi ahaanba waqti lumis iyo khayraadka. Sidaa awgeed, Samsung ayaa rajeynaya in maxkamaddu dhagaysan waayay mooshinka isla.
Waxaa la sheegayaa in No. ka 7.884.915 kaalin weyn ku mutaysan karo jebinta patent ah, sababtoo ah waa arin muhiim ah in Apple soo gaaray ay sabab u tahay Samsung patent jebinta khasaaro yaacday. Apple ku jawaabay in su'aal ah. Si kastaba ha ahaatee, Xafiiska patent ayaa sheegay in Apple ayaa muran ma ahaa ka dhaadhicinaya ku filan. Macnaheedu waa in, Apple ayaa si adag u shaqeeyaan si ay u ogaadaan xujooyin ka badan si loo hubiyo ansaxnimada No. 7, 884.915.
Wakhtigan, Apple codsatay dheeraad ah $ 380 milyan oo khasaare ah, laakiin Samsung ka fikiray, waxa loo baahan yahay oo keliya in ay lacag badan $ 52 million. Khilaaf ayaa xalin baxay. Ugu dambeyntii, gudoonka xeerbeegtida ee ahaa in Samsung ay leedahay in bixiso dheeraad ah oo $ 290 milyan si ay u Apple.
Siiyo weyn ee Samsung iyo Apple users?
Samsung iyo Apple way waaweyn yihiin laba saaraha casriga ah. Users aan tiro lahayn ayaa la qabatimay ee casriga ah dhaldhalaalaan oo laga cabsado, sida Samsung S4, Note Samsung 3, iPhone 5s, iPad mini 2. In muddo gaaban, u muuqataa patent ku mutaysan karo jebinta Apple ay kasoo horjeeddo Samsung ma laha saamayn weyn ku Apple iyo Samsung isticmaala. Sidaa awgeed, dadka isticmaala casriga ah ka iibsan kartaa oo ay isticmaalaan aaladaha ay Samsung, ama iPhone, iPad ama iPod, ama u kala bedesho Samsung in Apple, sida ay jecel yihiin.
Waa maxay Samsung iyo Apple users samayn karaa?
Waxba ma ahan wixii kiisaska dadka isticmaala Samsung iyo Apple ee, waxaan kaa baryayaa, waxa ugu muhiimsan ay tahay werwerayn oo ku saabsan waa in ay si wanaagsan u maamulaan casriga ah. Si aad u samaysaan shaqo fudud, waan hubaa oo ku saabsan in ay soo bandhigid saddex boosaska badan software desktop.
1. Software taageerayaasha Samsung
Sida ay magaceeda soo jeedisay, ee Wondershare MobileGo for Android iyo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) waxaa inta badan loogu talagalay maaraynta qalabka Android ka kombiyuutarka. Sidaa daraadeed, taageerayaasha Samsung si fudud ku hayn karaa music, videos, xiriirada, SMS, barnaamijyadooda iyo sawiro ku shubtaan taleefanadooda iyagoo Samsung iyo kiniiniyada si fiican u abaabulan. Just la mid click, oo ay awoodaan gurmad ama soo celin xog Samsung ah. Wixii junkies app, waxay waxaa loo ogol yahay in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda ku saabsan qalabka Samsung si deg deg ah, iyo dhoofinta ama share Chine in ay kombiyuutarka, Facebook iyo Twitter, iyo guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD.
2. Software for dunida Apple
The Wondershare TunesGo Retro , oo horay loogu magacaabay Wondershare MobileGo for iOS iyo TunesGo Wondershare Retro (Mac) , oo horay loogu magacaabay Wondershare MobileGo for iOS (Mac) waa mid caawisa oo ku wanaagsan in iPhone, iPad iyo iPod maamulka. Waxay ka dhigaysa mid u fudud in la dhoofiyo music, filimada, podcasts, buugaag, Lugood U, videos music, TV muujinaysaa iyo ka badan si uu Lugood iyo wareejiyo dheeraad ah oo ay PC iyo Mac. Intaa waxaa dheer. Waxay kuu ogolaanaysaa dadka isticmaala iyo music kala iibsiga, sawiro, filimada, bandhigyada TV oo dheeraad ah oo loogu badalo ka computer si, iPhone iPod iyo iPad aan ka kaaftoomi kasta.
3. Software dadka isticmaala samaynta xidhiidh u dhexeeya Samsung iyo Apple
Maxaa dhacaya haddii u isticmaala labada ayaa qalabka iyo Samsung iyo Apple doonayaan inay ku biiro? Waa wax iska fudud. The Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waa jidka. Loo arkaa mid ka mid phone-click ah in software kala iibsiga telefoonka, Wondershare MobileTrans ogolaadaa dadka isticmaala xiriirada, music, videos, fariimaha qoraalka ah iyo sawiro u dhexeeya qalabka Samsung iyo Apple qalabka wareejiyo.